यस्ती श्रीमती कसैलाई पनि नपरोस् , कारण यस्ताे छ ! – aajnepal
HomeRochakयस्ती श्रीमती कसैलाई पनि नपरोस् , कारण यस्ताे छ !
यस्ती श्रीमती कसैलाई पनि नपरोस् , कारण यस्ताे छ !
February 7, 2019 aajnepal Rochak 0
यस्ती श्रीमती कसैलाई पनि नपरोस् , कारण यस्ताे छ ! पुर्व पतिको हत्या गर्न खोज्ने एक महिलालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । उनको यो हर्कत सुनेर सबै आश्चर्यमा परेका छन् । पुर्ण योजनाका साथ ती महिलाले पुर्व पतिको हत्याको षडयन्त्र रचेकी थिइन् । एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार पुर्व पतिलाई मार्नु पुर्व उनले ४ घण्टासम्म सेक्स गरेकी थिइन् ।त्यसपश्चात उनले पतिलाई चक्कु रोप्ने काम गरेकी थिइन् । आरोपी महिलाको नाम डाल्या सैयद हो जसले आफ्नो पुर्व पति बिलाल मिआहको ज्यान लिने प्रयास गरिन् ।
यो घटना बेलायतको बर्गिह्याममा भएको हो । सन् २०१३ देखि यो जोडी छुटि्टएर बस्दै आइरहेको थियो ।उनीहरुबीच छोरीलाई लिएर तनाब रहेको थियो । आफुसँग छोरी राख्न दुवै जनाले कोर्टको सहायता लिएका थिए । डाल्यालाई डर थियो कि बिलालले कतै छोरीलाई आफुसँग राख्नेछन् र पाकिस्तान लिएर जानेछन् । बिलालका अनुसार त्यो पल निकै दर्दनाक र डरलाग्दो थियो ।
उनी भन्छन्जब डाल्याले काटिएको पेटबाट आन्द्रा निकाल्ने प्रयास गरिन्, म उनी देखि पर भाग्न प्रयास गरिरहेको थिए उनी यस घटना पश्चात फरार हुने कोशिसमा रहेकी थिइन् । तर, बिलालले उनलाई समात्ने प्रयास गरे । तर, डाल्याले पुन बिलाललाई चक्कु रोप्ने काम गरिन् ।प्रहरीका अनुसार बिलालको पेटमा ३० वटा टाका लगाइएको छ । उनलाई १० दिनसम्म अस्पतालमा रहेका थिए । डाल्या आफुलाई मार्न आएको नियतबारे बेखबर रहेको बिलालले कोर्टमा बताएका थिए ।
राती सुत्दा भान्सा कोठामा किन कहिल्लै जुठो भाडा राख्नु हुँदैन ? (भिडीयो हेर्नुस)
के हजुरलाई छोरो पाउने मन छ, त्यसो भए यसरी हुन्छ तपाईको इच्छा पूरा